Ini ndinowana "Kubva mundangariro" kukanganisa kana ndichigadzira PST /OST faira. Zvekuita? - DataNumen
Iko kukanganisa kunoreva yako PST /OST faira rakakura kwazvo uye nzvimbo yekurangarira mune yako system haina kukwana kuti uwane zvakare. Kazhinji, kukanganisa uku kunoitika kune mamwe akadzika-magumo makomputa, uye iyo PST /OST faira rakakura kupfuura 50GB.
Heano mamwe mhinduro dze "Kunze kwendangariro" kukanganisa:
Isa chigadzirwa chedu pane imwe komputa nekugadzirisa kuri nani kwemidziyo uye edza zvakare. Inokurudzirwa kushandisa 64bit komputa ine inopfuura 64GB ndangariro uye 64bit Outlook yakaiswa kuita basa. Ye 64bit Outlook, unogona kushandisa 64bit DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery izvo zvinonyatsoshandisa ndangariro mune yako system.
Ita shuwa kuti pane yakakwana yemahara disk nzvimbo mune yako C: drive. Windows inoshandisa nzvimbo dzediski muC: tyaira seyechokwadi ndangariro. Kana paine pasina yakakwana yemahara disk nzvimbo paC: drive, ipapo iwe uchazosanganawo nedambudziko rakadai. Inokurudzirwa kuchengetedza kanokwana 100GB yemahara disk nzvimbo pane yako C: drive.
Kana iwe unogona kushandisa DataNumen File Splitter kupatsanura PST yakoOST faira muzvidimbu zvakati wandei, imwe neimwe ingangoita saizi gumi. Wobva wamhanya DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery kugadzirisa izvi PST /OST mafaira rimwe nerimwe kana mubatch kuburikidza ne "Batch Repair" basa. Nekudaro, nemhinduro iyi, unogona kurasikirwa neimwe data kana uchipatsanura yako PST /OST faira uye mamwe maemail ari mumuganhu wefaira, asi unogona kudzivirira "Kubva mundangariro" kukanganisa kunoitika uye kupora most yeiyo data.
64bit, DataNumen File Splitter, nzvimbo dzakasununguka, Kunze kwendangariro, split